Bangiga First Community oo dhimaya shaqaalihiisa – The Voice of Northeastern Kenya
Bangiga First Community oo dhimaya shaqaalihiisa
Star FM November 8, 2016
Masuuliyiinta bangiga First Community ayaa shaaca ka qaaday in ay yareynayaan tirada shaqaalaha ka howl gala laamaha kala duwan ee bangigaasi, si loo ytareeo dhaqaalaha faraha badan ee ku baxa howlaha bangiga.
Warqad maalintii Jimcada ahayd loo diray dhammaan shaqaalaha ayaa loogu sheegay in uu wali heer sare gaarsiisanyahay qiimaha lacagaha bangiga gudihiisa ku baxaya, iyadoo aan guul laga gaarin dadaal bilihii lasoo dhaafay loogu jiray in hoos loo dhigo qarashkaasi.
Maamulka bangiga ayaa warqadooda ku sheegay in aysan hadda u furneyn waddo kale oo aan ahayn in shaqada laga eryo qaar ka mid ah howl wadeennada bangigaasi.
Madaxa dhinaca fulinta ee bangiga First Community Fazal Saib oo warqaddaasi ku saxiixnaa ayaa sheegay in go’aanka shaqaalaha la eryi doono uu ku xirnaan doono qiimeyn lagu sameynayo xirfadaha iyo shaqada shaqaalaha.
Hase ahaatee masuuliyiinta bangiga ayaan si rasmi ah u qeexin tirada shaqaalaha ee ay guryohooda u diri doonaan iyo goorta tallaabadaasi la qaadi doono toona, in kastoo qiimeynta ay socon doonto muddo 2 isbuuc ah.
← Isaac Ruto oo la dhigay isbitaalka
Xisaabiyeyaal cusub oo loo diray wasaaradda caafimaadka →